By vijayafm on	 February 20, 2019 कोरोना अपडेट, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट । सधैँ पछि बसेर, पछि परेको महशुस गरेका गैँडाकोटका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरु अब जागरुक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गैँडाकोट १ देखि १८ वडा सम्मका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो वडा समुन्नत र सुन्दर रहेको बताएका छन् । उनिहरुले सुन्दर बनाउन आवश्यक योजनाका बारेमा सपना समेत देखेका छन् । गैँडाकोट नगरपालिकाको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटनको विकास साझा विषय भएको उनिहरुको भनाइ छ । विकास भनेको भौतिक अवस्थाको सुधार मात्रै नभएर सामाजिक विविध आयामका बारेमा समनान्तर विकास पक्रिया आवश्यक भएको उनिहरुको बुझाइ रहेको छ । पहिलो पटक एकै पटक भेट भएका गैँडाकोटका दलित महिला सदस्यहरुले समुदाय, वडा र नगरको विकासमा एकजुट हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल दलित समाज गँैडाकोटको आयोजना, गैँडाकोट नगरपालिकाको सहयोग र विजय एफएमले सहजीकरण गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा आफूहरुभित्र बढेको आत्मविश्वास र क्षमताले अब परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अमरापुरीमा पाँचदिन सम्म जारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुको समुदायभित्रको समस्या मात्र नभएर सम्पूर्ण वडाको विकास र उन्नतीका लागि सबै समुदायको हित र विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।
गँैडाकोट नगरपालिका वाड नं. १ की वडा सदस्य देवी विकले गँैडाकोट १ लाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकियो भने वडाको मात्र नभएर नगरकै समृद्धि कायम हुने बताउनुभयो । विकले गैँडाकोट १ मा रहेको मौलाकालिका मन्दिर, लक्ष्मीनृसिंह दिव्यधाम, विभिन्न मठमन्दिरहरुको प्रवर्धन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वन, सहकारी लगायतका विभिन्न संघसंस्थासंगको सहकार्यमा गरिबी न्यूनिकरणका कार्यक्रम अघि बढाउन सके वडा सुन्दर वडा हुने उहाँको धारणा थियो ।
गँैडाकोट नगरपालिका वाड नं. २ सदस्य सावित्री दर्जीले गैँडाकोट २ लाई नगरकै मजबुत आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएको हुँदा पनि सुविधा सम्पन्न होटल व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सकिने, मौलाकालिका मन्दिरको द्वारको रुपमा रहेको हुँदा धार्मिक पर्यटकहरुबाट लाभ लिन सकिने भएकाले त्यस्ता योजनामा ध्यान दिन सक्यौँ भने वडा सुन्दर हुने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी भृकुटी कागज कारखानाको पुनः सुचारु होस् या सोही स्थानमा अन्य व्यवसायिक थलो बनाइ धेरैलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सके वडा आफैमा सुन्दर बन्ने बताउनुभयो ।
गँैडाकोट ३ वडा सदस्य मित्रमाया सुनारले धेरै वन क्षेत्र रहेको गैँडाकोट ३ लाई समृद्ध र सुन्दर बनाउन जडिबुटीको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने योजना अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । बाटोघाटो नहुँदा सबै भन्दा पिछडिएको उहाँको भनाइ छ । बाटो मात्रको सहजताले गैँडाकोट ३ सुनमा सुगन्ध हुने सुनारको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयका कुरा उठीरहेको छ यसलाई पूर्णता दिन सकियो भने पनि गैँडाकोट ३ नगरकै समृद्ध र सुन्दर वडा बन्नेछ ।
मौलाकालिका मन्दिरको काखमा अवस्थित गैँडाकोट ४ आफैमा सुन्दर वडा रहेको छ । डाँडा क्षेत्रबाट आएको भल नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको गैँडाकोट ४ वडा सदस्य ज्ञानसरा विकले बताउनुभयो । विकले भन्नुभयो “यसले पनि वडा सुन्दर बन्दै गइरहेको छ । कोटेश्वर मन्दिरको प्रवर्धनले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेछ । सहकारीहरुको संगको सहकार्यले आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम र सीपमूलक कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेछ । यसैगरी बाटोघाटो निर्माणका साथमा कृषि उपज उत्पादनका लागि किसानका लागि उन्नत जातका विउ वितरण, प्राविधिक सहजीकरण लगायतका काम गर्न सकियो भने आर्थिक सक्षमतासंगै वडा सुन्दर बन्दै जानेछ ।”
गँैडाकोट ६ वडा सदस्य कल्पना परियारलाई सुन्दर वडाका लागि अनुशासन र नैतिकताको पाठ जरुरी लाग्छ । परियार भन्नुहन्छ “अनुशासन पहिलो बाटो हो । मेरो वडालाई राम्रो वडा बनाउन समुदायमा अनुशासन फैलाउन आवश्यक छ ।” गैँडाकोट ६ मा मठमन्दिर र संस्कृत पाठशालाको रुपमा रहेको कालिका विद्यापीठ जस्ता संस्थाले नैतिकता र अनुशासनको पाठ सिकाएको हुँदा वडा सुन्दर रहेको बताउनुभयो । यसले निरन्तरता पाउन सक्यो र कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनमा नगरले चासो देखाउन थाल्यो भने आफ्नो वडा सधैँ सुन्दर हुने परियारको विश्वास रहेको छ ।
धर्म र नैतिकताको बाटो देखाउने हरिहर मन्दिरले वडाको सुन्दरतालाई थपेको गैँडाकोट ७ वडा सदस्य छलिमाया परियारको भनाइ छ । सीपमूलक काम सीकाउने संघसंस्थाहरुले वडामा विभिन्न गतिविधि काम गरिरहेका छन् यसले पनि वडामा आर्थिक उपार्जनका लागि मद्दत मिलेको छ । यसैगरी वडामा विपी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने नगरको अभियानले पूर्णता पाउन सक्यो भने वडाले विश्वमै चर्चा पाउन सक्छ । यसले ठूलो रोजगारीको सिर्जना गर्ने छ । वडा भित्रै हाट बजार बनाउने अभियानलाई पूर्णता दिन सक्यौँ भने उत्पादीत तरकारीले बजार पाउन मद्दत मिल्नेछ । साँच्चीका किसानहरुका लागि मल विउ वितरण, सहुलियत दरमा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने वडा नमुना बन्ने कुरामा कुनै शंका नहुने छलिमायाको भनाइ रहेको छ ।
गैँडाकोट ८ मा विजय बिकास स्रोत केन्द्र, विकू बचत, किसान बचत, जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालय कालिका स्कूल, देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम र विजय खबर पत्रिका जस्ता सञ्चारमाध्यम तथा संघसंस्था रहेको गैँडाकोट ८ वडा सदस्य सुशिला परियारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यीनै संघसंस्थाले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रको सुन्दरतालाई बढाउन ठूलो अभियान चलाइरहेका छन् । जसका कारण अहिले पनि वडा सुन्दर वडाको रुपमा रहेको छ । अब स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरेर अघि बढ्न सकियो भने वडा आफैमा सुन्दर बन्ने पक्का रहेको वडा सदस्य परियारको भनाइ छ । उहाँले गैँडाकोट ८ मा रहेका संघसंस्थाले बचत तथा वित्तिय सचेतनाको अभियान चलाएका कारण पनि देशमै यो वडा नमुना तथा सुन्दर वडाको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै गैँडाकोट ९ की वडा सदस्इ निरा दर्जीले गैँडाकोट ९ लाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका साथमा कृषिको लागि उपयुक्त वडाको रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । यस वडाको हनुमान मन्दिर क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने नेपाली यात्रुका लागि मात्र नभएर भारतीय तीर्थालुलाई मध्य नजर गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने दर्जीको भनाइ छ । वडामो रहेको गुम्बा मन्दिर परिसरमा भ्यू टावर स्थापना गर्न सकियो भने पनि यसले वडाको पहिचानका साथमा आर्थिक उपार्जोनका ढोकाहरु खोली दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस वडाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या झेलीरहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनमा दीर्घकालिन विकल्प खोज्न सकियो भने वडा सुनमा सुगन्ध हुने बताउनुभयो ।
ठूला उद्योगहरु रहेको आफ्नो वडा व्यवसायिक र औद्योगीक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने गैँडाकोट १० की वडा सदस्य पूजा विकको भनाइ छ । विकका अनुसार टुबोर्ग तथा टाइम फर्मा जस्ता उद्योगहरुले वडामा स्वरोजगार सिर्जना गरको भन्दै उद्योग व्यवसायको वातावरण तयार गर्न सके वडा मात्रै नभएर नगरले कोल्टे फेर्ने वडा सदस्य विकको भनाइ रहेको छ । विकू किसान जस्ता संघसंस्थाहरुले बचत गर्ने बानी सिकाएका हुँदा सुरक्षित जीवनका लागि सचेतना बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । अब कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा बजेट र योजनाहरु किसान मैत्री बनाउन सकियो भने वडा सुन्दर हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिने वडा सदस्य विकको धारणा रहेको छ ।
मुकुन्दपुर हरियाली क्षेत्र भएकैले आफ्नो वडा त्यसै सुन्दर भएको गैँडाकोट ११ की वडा सदस्य बुद्धिमाया नेपालीले बताउनुभयो । सुनारले आफ्नो वडाको सुन्दरता यसरी बयान गर्नुभयो “ उभोँ हेर्यो शिव मन्दिर, तल हेर्यो नारायणी यसको सुन्दरताले नै वडा सुन्दर नगर बनेको छ ” । महिलासमूहरुको एकताले पनि वडाको पहिचान बनाएको छ । महिला समूहको एकतालाई सामाजिक काममा लगाउन सकियो भने यसले पनि वडा सुन्दर बन्ने उहाँको बुझाइ छ । मालपुर खोलामा रहेकी जलदेवीको प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक भएको नेपालीले बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले कृष्णमन्दिर, गुह्येश्वरी मन्दिर लगायतका स्थानले वडाको धार्मिकता झल्काएको बताउनुभयो ।
गैँडाकोट १२ वडा सदस्य हरिकला सुनारलाई आफ्नो वडा सुन्दर बन्ने विश्वास छ । आफै पनि पशुपालनको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै आउनुभएकी सुनारलाई कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदान, प्राविधिक सहयोगको सहजता हुने हो भने गैँडाकोट १२ का धेरै परिवार यस तर्फ आकर्षिकत हुने उहाँको भनाइ छ । मालपुर मटकुरी क्षेत्रलाई होमस्टेको रुपमा विकास गर्न सक्ने हो भने शहरी वातावरणबाट दीक्क जमात घुमघाम तथा शान्त वातावरणको लागि यस तर्फ आउने उहाँको विश्वास छ । सुनारले सीपमूलक र व्यवसायिक तालिममले स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पु¥याउन सके गैँडाकोट १२ सुन्दर वडा बन्ने बताउनुभयो । दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा पनि किसान मैत्री कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहको उहाँको भनाइ छ ।
“अहा कति राम्रो वडा, सबैले भन्छन् राम्रो वडा, नारायणी छउमा कैलाश सन्यास आश्रम, आहा कति राम्रो वडा” यी हुन् गैँडाकोट १३ वडा सदस्य उषा विश्वकर्माका शब्द । उहाँलाई पनि आफ्नो वडा सुन्दर लाग्छ । तर अझै सुन्दर बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । गैँडाकोट १३ को विकास र समृद्धिका लागि धेरै कामहरु मध्ये कैलाश सन्यास आश्रमलाई प्रवर्धन गर्न सकियाँै भने, पुराना पुरातात्कि सम्पदा हेर्नका लागि जिल्लाबाट मात्रै होइन देशका कुना कुनाबाट गैँडाकोट १३ आउने वडा सदस्य विश्वकर्माको भनाइ छ । वडा भित्र रहेका विद्यालयहरुलाई कलेजको रुपमा स्थापना गर्न सकियो भने , अमरापुरी मुकुन्दपुरका विद्यार्थीहरु चितवन जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी वडाको विकासका लागि मनमोहन रंगशाला बनाउन सकियो भने यसले पनि राष्ट्यि ख्याती कमाउन सजिलो हुने विश्वकर्मको बुझाइ छ । यसैगरी गैँडाकोट १३ का बाटो छेउमा एउटै रुख रोप्न सकियो भने, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने यात्रुले रुख हेरेरै गैँडाकोट आयो भन्ने थिए । यसले वडाको मात्र होइन नगरको समेत पहिचान र सुन्दरता बढाउने विश्वकर्माको भनाइ छ ।
गैँडाकोट १४ भौगोलिक रुपमा कतै होचो र कतै अग्लो स्थान रहेको वडा सदस्य निर्मला सुनारले बताउनुभयो । साविक गाविस हुँदै पूर्ण सरसफाई भइसकेको यो वडा अहिले पनि सुन्दर रहेको सुनारको भनाइ छ । सुन्दर वडा हाम्रो वडा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “सुन्दरी सामुदायिक वनले सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो काम गरिरहेको छ । सुन्दरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा जडिबुटीका क्षेत्रमा काम गर्न सकियो भने यसले वडाको समुन्नत बनाउने योजना सफल बनाउने थियो । यसैगरी चारवटा विद्यालय रहेका छन् । सबैमा माध्यामिक स्तरको पढाइ हुन सकेको छैन । माध्यामिक स्तरको पढाइ गर्न सक्यौँ भने वडा शैक्षिक क्षेत्रमा उज्यालो छ । टाँडी भेगमा अदुवा , बेसार, लगायतका खेती राम्रो रहेको छ । विजुली बत्ती सबै स्थानमा पुर्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुने थियो । संघसंस्थाको विषयमा सहकारी जस्ता संस्थाले वित्तिय सचेतना फैलाउने काम गरको छन् । मन्दिर तथा गुम्बा रहेका छन । सुकुम्बासी समस्या हटाउन सकियो भने अझै वडा सुन्दर हुने थियो । कतिपय स्थानमा महिलाहरुले आर्थिक उपार्जनका लागि बाध्य भएर रक्सी उत्पादन गर्ने गर्नुभएको छ । अन्य सीप सिकाउन सकियो भने वडा सुन्दर हुन्छ ।”
गँैडाकोट १६ लाई नमुना वडा बनाउन स्थानीय सरकारका साथमा वडाबासी र विभिन्न संघसंस्थाको भूमिका रहेको छ र अब पनि रहने गैँडाकोट १६ वडा सदस्य सरिता देवी दर्जी को छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “यहाँ किसान, विकू, छहारी जस्ता सहकारीले सीप मात्रै होइन बचत र आइपर्ने गर्जो टार्न सजिलो बनाएका छन् । भविष्य सोच्न सिकाएका छन् । १६ नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ । यसलाई अझ प्रविधि युक्त र एम्बुलेन्स थप गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्यको क्षेत्र सुन्दर हुनेछ । जिल्लामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल विद्यालय यस वडामा रहेको छ । झरे खोलाको तटबन्धन । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने वडा सुन्दर वडा बन्ने वडा सदस्य सरिता देवी दर्जिको रहेको छ ।
यातायातको सहजता रहेको गैँडाकोट १७ मा पशुपालन र कृषिको क्षेत्रको प्रवर्धन मात्र गर्न सकियो भने वडा समुन्नत र सुन्दर बन्ने वडा सदस्य माया दमैको बुझाइ रहेको छ । गाइपालनको ठूलो सम्भावना रहेको यस वडामा यसका लागि वडा तथा नगर र अन्य संघसंस्थाले काम गर्न सके वडा सुन्दर बन्ने वडा सदस्य दमैको भनाइ छ । दुग्ध उत्पादनमा राम्रो वडा छ । रेड हाउस जस्ता होटल रहेका छन् । नारायणी किनारमा विभिन्न होटल क्षेत्र बनाउन सकियो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने वडा सदस्य दमैले बताउनुभयो ।
गैँडाकोट नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र गैँडाकोट १८ मा समस्याको चाङ त धेरै छ तर समस्या सम्भावना पनि उत्तीकै रहेको गैँडाकोट १८ वडा सदस्य शान्ति माया दर्जिले बताउनुभयो । वडा प्राकृति र भौगौलिक रुपमा सुन्दर रहेको तर सर्वसुलभ बाटो मात्र बने सुनमा सुगन्ध हुने दर्जीको भनाइ छ । गँैडाकोट १८ लाई बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउने नगरको योजनाले पूर्णता दिन सबै एक जुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी मौरीपालन, अदुवा खेती, सीपमूलक तालिम, कृषि उपज उत्पादनका लागि आवश्यक तालिमहरुको व्यवस्थापन गर्न सके वडा झन् सुन्दर बन्दै जाने बताउनुभयो । आहालेमा बाख्रापालनको सम्भवना, हुर्जिल मटकुरीमा शीपमूलक तालिम दिन सकीयो भने घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने बाध्यता हटेर जाने र झन् वडा सुन्दर बन्ने वडा सदस्य शान्तिमाया दर्जिको भनाइ रहेको छ ।